ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း ၂၅ နှစ် – DVB
ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း ၂၅ နှစ်
Grand Royal ကုမ္ပဏီ နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်သည့် ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်းကြီးဆုကို (၅) နှစ်ဆက်တိုက်ရယူ
ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၉ ) ရက်
နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုသော ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်းကြီးဆုကို (၅) နှစ်ဆက်တိုက် ရယူလျက်၊ Grand Royal Group International က ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း ၂၅ နှစ်မြောက် ငွေရတုနှစ်ပတ်လည်ကို ဆင်နွှဲခဲ့
Grand Royal Group International (GRGI) သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်၊ နာမည်ကျော် ဝီစကီ အမှတ် တံဆိပ်များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း (၂၅) နှစ် ပြည့်၊ ငွေရတုနှစ်ပတ်လည်ကိုဆင်နွှဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း (၂၅) နှစ်ကြာ၊ အတွေ့အကြုံများကြောင့်၊ မြန်မာပြည်တွင်း ယမကာထုတ်လုပ်ခြင်းကဏ္ဍတွင်၊ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်းကို အများက အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းလည်း လက်ခံရရှိထားသည်။ နိုင်ငံတွင်းတွင် ဆုတံဆိပ်များသာမက၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက အသိအမှတ်ပြုသော၊ ထိပ်တန်းဝီစကီအမှတ်တံဆိပ်များတွင်၊ အကောင်းဆုံးဝီစကီအတွင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
GRGI ၏ တွဲဖက်ဥက္ကဌ၊ ဦးအောင်မိုးကျော်က၊ “ကုမ္ပဏီ (၂၅) နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့အတူ၊ အခါအခွင့်ကြုံခိုက်၊ ကျွန်တော်တို့ အမှုဆောင်အရာရှိအသစ်ဖြစ်သူ၊ Mr. Rahul Colaco ကို ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ GRGI အနေနဲ့ တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ နိုင်ငံ့သားကောင်းကုမ္ပဏီအဖြစ်၊ နိုင်ငံတော်ကို အခွန်အခတွေ ပေးဆောင်ခဲ့တာ၊ အခုဆိုရင် အများဆုံးအခွန်ထမ်းဆောင်သူ စာရင်းမှာပါဝင်လို့၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကနေ၊ ဂုဏ်ပြုတဲ့ ဆုတွေကို ချီးမြှင့်တာ (၅) နှစ်တာဆက်တိုက်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ အများပြည်သူအတွက်၊ အခွန်အခတွေကနေရတဲ့ ဘဏ္ဍာငွေဟာ အင်မတန်အရေးပါမှန်း သိရှိနားလည်ထားတဲ့ အတွက်၊ ကျွန်တော်တို့ ထမ်းဆောင်ရမယ့်၊ အခွန်အခတွေကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ဖို့၊ အထူး အလေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) စည်းကြပ်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ၊ စုစုပေါင်း (၁၁၃.၉) ဘီလီယံကျပ်ငွေ၊ အခွန်ထမ်း ဆောင်ထားပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ၊ Mr. Rahul Colaco က “အခု ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ၊ ထုတ်ကုန်တွေ ပိုမိုတိုးတက်ဖို့၊ သုတေသနတွေ၊ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းတာတွေ၊ လူမှုအသိုင်းအဝန်းတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့ အစီအစဥ်တွေအတွက် ရာထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုထက်ထိ၊ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုတဲ့ ကုန်ကြမ်းဆန်ကွဲ တန်ချိန်ပေါင်းများစွာကို ပြည်တွင်းက တောင်သူတွေဆီကနေ၊ဝယ်ယူအားပေးတဲ့အတွက်၊ ပြည်တွင်းက တောင်သူတွေအတွက်၊ မြန်မာကျပ်ငွေ ဘီလီယံနဲ့ချီပြီး ဝင်ငွေတွေရအောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။” ဟုဆို သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့်” နိုင်ငံ့သားကောင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တည်ရေး” နှင့်အညီ၊ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး၊ အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ နဲ့ ကျန်းမာ ရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနများ၏ လမ်းညွှန်မှုများ ခံယူခဲ့ပြီး၊ ပထမလှိုင်းစတင်ကတည်းက၊ လူထုအထောက်အပံ့အဖြစ်၊ မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း (၅,၀၀၀) တန်ဖိုးရှိသော၊ လက်သန့်ဆေးရည်ဗူးပေါင်း (၂၀၀,၀၀၀) ကို နိုင်ငံတဝန်းမှာရှိ၊ ဆေးရုံများ၊ ကွာရန်တင်းစင်တာများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ နှင့်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ အခြေခံလူမှုအသိုင်းအဝန်းများအတွက်၊ အဓိက လိုအပ်သော၊ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်းများ၊ ဆန် နှင့် ဆီ အခြေခံစားသောက်ကုန်များကိုလည်း၊ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းထားသည်။
မကြာသေးမီကပင်၊ ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း (၂၅) နှစ်မြောက်၊ ငွေရတုအ ထိမ်းအမှတ်အနေနှင့်၊ မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း (၂,၀၀၀) တိတိကို၊ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေး ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆပ်ကော်မတီ သို့ UMFCCI အသင်းကြီးမှတဆင့် လှူဒါန်းထားပြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ ဦးဆောင်သည့် “STOP COVID-19 Yellow Campaign” လှုပ်ရှားမှုတွင်၊ New Normal နှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်ရေးအား ရှေးရှူ၍ ပူး ပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။ ပြည်ပထိုင်းနိုင်ငံတွင်၊ ‌ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော၊ မြန်မာပြည်သူအများ၊ GRGI ၏ ဒါရိုက်တာနှင့်အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အစုရှယ်ယာဝင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် Thai Beverage Public Company Limited မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ Mr Polapatr Suvarnazorn က ဦးဆောင်ပြီး၊ COVID-19 တစ်ကိုယ်ရေသုံး အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့်၊ နှာခေါင်းစည်း အရေအတွက် စုစုပေါင်း (၂၀,၀၀၀) ခု၊ အရက်ပျံပမာဏ (၇၂) ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သော၊ အရက်ပျံ (၁၀၀) လီတာနှင့် လက်သန့် ဆေးရည်ဂျဲလ်ဘူး (၂၀) ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ၊ ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံး၌၊ သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သိန်းထံသို့၊ မကြာသေးမီက လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကုန်၊ ကိန်းဂဏန်းများအရ၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းများရှိ၊ ကျေးရွာပေါင်း (၁၃၁) ရွာရှိ၊ အိမ်ခြေပေါင်း (၁၂,၃၇၉) အိမ်ခြေမှ အများ ပြည်သူပေါင်း (၇၃,၃၃၄) ဦးအတွက်၊ သောက်သုံးရေကြည်ရေသန့်များရရှိရန်၊ ရေတွင်းများ၊ ရေပိုက်လိုင်း များ၊ တိုင်ကီများ တည်ဆောက် တပ်ဆင်ပေးကာ၊ ပညာပေးလုပ်ငန်းများလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Job Net Myanmar Co., Ltd က ကြီးမှူးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် “မြန်မာနိုင်ငံတွင်အလုပ် လုပ်ကိုင်ရန် အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ (Best Companies to Work in Myanmar 2020, BCIM) ဆု” လုပ်ငန်းရှင်များ၏ထူးချွန်မှုအပေါ်ဂုဏ်ပြု အသိအမှတ်ပြုသည့် Myanmar Employer Awards 2020 အခမ်းအနား၌အလုံးစုံကဏ္ဍတွင် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဆုအပြင်၊ အခြားသော ဆုအမျိုးအစား (၅) ဆုဖြင့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
IMMEDIATE 29th January 2021
Grand Royal Group International celebrated its 25th anniversary with the people of Myanmar and being the recipient of the President’s Tax award for the 5th year running
Grand Royal Group International (GRGI) is Myanmar’s leading alcohol beverage company with many iconic whisky brands. It celebrated its 25th anniversary in 2020. With its experience of over 25 years in the industry it is the undisputed leader of the alcohol industry in Myanmar and the region. Not only has it won local awards but GRGI’s brands and products have been listed as within the top whisky brands in the World.
U Aung Moe Kyaw, Co-chairman of GRGI said “I would like to take this opportunity to to welcome Mr. Rahul Colaco on board. GRGI has consistently been one of the top taxpayers in Myanmar over the last5years. We have also won the Prestigious President’s Tax Awards for the last5years. We take our tax obligations very seriously and recognise the importance of tax contributions towards the government’s tax income. We have contributed 113.9 billion MMK in license fees, duties and taxes last year.”
“We have earmarked funds for product development, research, quality control and community involvements for 2021. The top priority has and will always be the investment in our customers, staff, partners, and the local communities. We have purchased hundreds of thousands of tonnes of broken rice yearly from the local Myanmar farmers, bringing in billions of MMK into the local farming economy.” stated Mr. Rahul Colaco, CEO of GRGI.
In accordance with the company’s motto of “BeingaGood Corporate Citizen”, following the guidance of National Level Central Committee for Prevention, Control and Treatment of COVID-19 and Ministry of Health and Sport, since the beginning of the first wave, asashow of support towards the people of Myanmar, we donated 200,000 bottles of hand sanitizers worth of 500 million MMK, to hospitals, Quarantine canters, Monasteries, Nunneries and local NGOs supporting the pandemic relief efforts and Furthermore, we donated essential commodity such as masks, rice and cooking oils to under privileged communities during this difficult time. Moreover, the company donated 600 COVIFOR Remdesivir injections manufactured in India to treat 100 critically infected patients to the Department of Medical Research. Recently to commemorate its 25th anniversary ,the company donated 200 Million MMK to the National Level Central Committee for Prevention, Control and Treatment of COVID-19 for the purchase of vaccines via UMFCCI and in order to continue the business operations with New Normal, the company participated in “STOP COVID-19 Yellow Campaign” initiative led by the Ministry of Health and Sport and Yangon Regional Government.
Not only did the company focus in the community efforts here in Myanmar but its majority shareholder, Thai Beverage Public Company Limited, donated over 20,000 pieces of surgical masks , 100 litres of 72% alcohol and 20 bottles of alcohol gel to His Excellency U Myo Myint Than, the Myanmar Ambassador to Thailand at the Embassy of the Republic of the Union of Myanmar in Bangkok. GRGI’s Director Mr Polapat Suvarnazon, Advisor to the CEO of Thai Bev donated them
According to the record by the end of 2020, the long running campaign on providing free eye treatment helped over 74,000 patients who could not afford sight-saving treatment. And we continue working hard to bring clean water to villages and poor districts through the provision of wells, supporting facilities and education and have brought accessing drinking water for over 12,379 Household and over 73,334 residents in 131 villages across Mon state, Yangon, Mandalay, Ayeyarwady, Bago and Magway regions.
The company is also very proud that its staffs have reciprocated and the company was awarded as one of the winners of “Best Companies to Work in Myanmar 2020, BCIM” powered by Job Net Myanmar Co.,Ltd as well as “Overall Best of the Best” under local organization category and another five categories under different areas of strength in Myanmar Employer Awards 2020 This is the third consecutive year of participation in MEA 2020 and GRGI competed for five categories of Myanmar Employer Awards 2020 and received awards in all five categories.